Tsena eto an-drenivohitra Horavana avokoa ireo miorina manoloana ny biraom-panjakana
Mitohy ny fandravana ireo tsena voalaza fa tsy ara-dalana tanterahin’ny kaominina Antananarivo renivohitra.
Ankoatra ireo efa niaraha-nahita andro maromaro lasa izay dia horavana daholo ihany ka ireo tsena manoloana ny biraom-panjakana eto an-drenivohitra. Ho an’ny etsy Tsaralalana ohatra dia esorina avokoa ireo tsena mety manelingelina ny asan’ireo mpitsabo miasa ao amin’ny hopitalin’ny zaza eny an-toerana sady ho fitandroana ny fahasalaman’ny marary ihany koa. Toraka izany ny manakaiky ny masoivohon’i Frantsa izay biraom-panjakana mitohy miakatra miazo an’Ambatomena. Na izany aza anefa dia nanambara kosa ny tompon’andraikitra ny tsena eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra fa efa eo am-pijerena ny toerana hamindrana ireny mpivarotra ireny ny Ben’ny tanana Naina Andriantsitohaina sy ny ekipany ankehitriny. Hisy ny foto-drafitrasa vaovao hatsangana hahafahana mamaly ny filàn’ny mponina. Ho an’ireo mpivarotra amoron-dalana eny Anosibe sy Namontana kosa dia fantatra fa hitohy ny fanalan’ny kaominina azy ireny.